Abathengisi Bamathrendi Amaholide Abakwazi Ukuziba | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Novemba 30, 2012 Lwesibili, Disemba 4, 2012 Douglas Karr
Isikhathi samaholide yisikhathi esimangazayo ngoba, ngokombono wami, cishe konke kumayelana namadili nokwenyuswa. Kubonakala sengathi unyaka wonke, abathengi bakhathazekile ngekhwalithi yabathengisi, ubudlelwano, izinqubomgomo zokubuyisa nokuthunyelwa kwemikhumbi… kepha konke kubukeka sengathi kuphuma ngewindi phakathi namaholide. IMDG Advertising ikuhlanganisile lokhu infographic kwezinye zezinkambiso abakholelwa ukuthi abathengisi abakwazi ukuziba.
Unyaka ngamunye, amaholidi aletha abathengi abafuna izipho ezinhle namadili amahle. Kusasele isikhathi eside ngaphambi kokuba uquqaba lufike ezitolo ezinkulu, abathengisi banamehlo abo ekuboneni izitayela zokuthenga zesizini ezizocacisa ukuthi imizamo yabo yokumaketha ngamaholide iqondiswa kuphi. Ukunikeza laba bamakethi isipho sokuqondiswa, i-MDG Advertising idale le infographic yomkhosi elandelayo. Kukhombisa ukuthi idigital ihamba kanjani ngendlela abantu baseMelika abathenga ngayo nabasebenzisa ngayo le sizini.
Ukuthatha kwami… kungcono ube namadili amahle futhi uzilungiselele kangcono ukumaketha lokho okuzokwenzeka. Ngiyethemba, abantu bazokwengeza ezinye izinto ezanele enqoleni yabo yokuthenga ukuze ubuyele kokumnyama!
Tags: izitayela zamaholidemdg ukukhangisa
Indawo yokudlela yabathengi yokudlela yeselula ka-2012